Home Wararka In ku dhaw 100 Xildhibaanada cusub oo maanta Muqdisho ka dhooftay
In ku dhaw 100 Xildhibaanada cusub oo maanta Muqdisho ka dhooftay
Waxaa maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho tiro Xidlhibaanada cusub oo ku dhaw 100 kuwaas oo safaro kala duwan uga aaday dalalka dariska iyo Turkiga.
Xildhibaanadaan ayaa qaatay fasax iyaga u gaar ah oo ayan jirin cid u fasaxday. Waxa ayna fasax u aadeen in ay la soo ciidaan caruutooda iyo eheladoodaba.
Safarka Xildhibaanada ayaa dib u dhigaya howlaha Doorashada madaxweynaha. Doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in qabsoonto Bartamaha ama dabayaaqada bisha maajo
Previous article[XOG] Safiir Xamar laga soo diray oo qufushay safaaradda Soomaaliya ee Talyaaniga
Next articleXildhibaanada golaha shacabka oo berri kulmaya iyo xil wareejin dhici doonta
MW Jubbland oo caawa jooga Jiida hore ee dagaalka Al Shabaab...